Maninona i Bing no Mandresy Fikarohana horonan-tsary amin'ny Google | Martech Zone
Asabotsy, Jona 13, 2009 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Google dia mety manadino kely loatra amin'ny lahatsoratra. Topazo maso ny maha samy hafa azy Valin'ny fikarohana video nataon'i Google ary Valin'ny fikarohana horonantsary Bing. Matetika aho tsy manome ny trosa Microsoft amin'ny departemantan'ny fampiasana - fa nofantsihan'izy ireo ity!
Valin'ny fikarohana horonantsary Google
Valin'ny fikarohana horonantsary Bing
Ity misy andian-dahatsoratra manan-danja amin'ny Fikarohana horonantsary Bing mihoatra ny Karoka Video Google:
Rehefa mivezivezy amin'ny Bing ianao dia mandeha ho azy miaraka am-peo ny horonan-tsary. Google dia mamela anao hivezivezy amin'ny atiny - fa aorian'ny fanindriana fotsiny ianao handefasana ilay horonan-tsary eo amin'ny interface-dry zareo.
Bing dia manome topi-maso lehibe kokoa amin'ny pikantsary tena izy noho ny Google - izay miankina amin'ny lahatsoratra tsy ilaina. Ny horonan-tsary dia mpampita sary, avelan'i Bing ho lohalaharana izany. Azonao atao ny manisy totozy ny lohateny amin'ny Bing hahazoana ny anaram-boninahitra feno raha toa ka voakilasy.
Rehefa milalao ny horonan-tsary ao amin'ny Bing ianao dia saika manana ny haben'ny pejy… mahafinaritra - indrindra ho an'ny atiny famaritana vaovao sy avo kokoa. Ny horonan-tsary hafa dia mbola voatanisa ao ambany ary mbola azo alefa autoplay rehefa totozy eo amboniny ianao.
Ny fanitarana ny safidinao fikarohana dia tsotra sy intuitive eo amin'ny sisiny ankavia amin'ny Bing. Google dia mitaky anao amin'ny tsindrio ny Advanced Video Search mba hahatongavana amin'ny safidy fanivanana mitovy.
Tsy manao ny pejy faran'izay tsara sy tsara tarehy indrindra i Google, fa ny pejy Valin'ny Fikarohana horonantsary kosa tsy azo tantanana sy ratsy tarehy. Raha ny hevitro dia nanao asa mahafinaritra i Bing tamin'ny famelarana ny pejy ary hampiasana azy io ho azo ampiasaina bebe kokoa. Sarotra ny mikaroka horonantsary - ary tsy ny algorithma no lehibe indrindra… mazàna ianao tokony hivezivezy be. Ny interface sy ny fampiasana an'i Bing dia manamora kokoa ny fikarohana, fizahana ary fitadiavana ilay horonantsary tadiavinao.
Tags: aangleadalvib2b safidybnpositivedanfahrnerspsullivan
Tonga ny Twitter Analytics